Fifaliana eo am-panompoana ny kapitenintsika
“Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay; fa ho amin’izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason’ny vavolombelona maro”. 1 Tim. 6:12
Misy fifaliana tsy misy toa azy ary tsy hita na aiza na aiza raha tsy amin’ny fanaovana ny asa tsy maintsy atao amin’ny maha-miaramila mahatoky, sy ny fankatoavana ny baikon’Ilay Kapitenin’ny famonjena antsika. Ho ao am-pon’ny miaramila mahatoky ny fiadanan’i Kristy, mahita fitsaharana ny fo mitondra ny ziogan’i Kristy sy milanja ny entany. Toa misy fifanoherana amin’ny filazana hoe tsy misy fitsaharana ho an’ny fanahy, afa-tsy izay hita ao amin’ny fanompoana maharitra sy feno fanoloran-tena, kanefa marina izany. Ao amin’ny fanompoana amim-pankatoavana sy vokatry ny fo no misy fifaliana , izay mahatonga ny amintsika rehetra handroso amin’ny asa feno fifaliana, ho finaritra ary hirindra eo am-pankatoavana ny baikon’Ilay Kapiteny. Arakaraka ny maha-goavana ny andraikitra omena ny miaramilan’i Kristy no mahafaly ny fo amin’ny fitiavana sy ny fankasitrahan’ny Mpamonjy. Mahatsapa fahalalana ny fo eo am-panatanterahana ny asa mafy sy mavesatra.
Ny fanaovana ny adidy amin’ny maha-miaramila dia midika hoe miasa. Tsy tahaka ny asa andavanandro izay araka ny safidintsika izany. Tsy maintsy misedra fitsapana sy fahasahiranana ary zava-tsarotra ny miaramilan’i Jesôsy. Misy mantsy ny ady izay tsy maintsy atao mandrakariva amin’ny devoly sy ny fironan’ny fontsika ihany koa. Tsy isika no handeha hifidy izay asa mahafalifaly antsika; satria miaramilan’i Kristy izay eo ambany fifehezany, dia tsy tokony hitady izay hahafinaritra antsika isika. Tsy maintsy miady ny adin’Andriamanitra amin-kerim-po isika, manana fahavalo tsy maintsy resena izay te hifehy ny herintsika rehetra isika.
Tsy maintsy vonoina ny sitrapo ao anatintsika, ka Kristy irery ihany no hankatoavina. Ny miaramila ao amin’ny tafik’i Kristy dia tsy maintsy mianatra miatrika zava-tsarotra, mandà ny tenany, milanja ny hazo fijaliana, ary manaraka ny lalàna izay itarihan’ny Kapiteny azy. Maro ny zavatra atao izay mandreraka amin’ny maha olona, ary maharary ny nofo aman-drà. Mila ezaka feno fahavononana sy mitohy izany asa atao amim-panetren-tena izany. Mihazona ny fiainana mandrakizay isika amin’ny fiadiana ny ady tsaran’ny finoana sy ny fahazoana ny fandresena sarobidy. Yi, 22 Desambra 1886.